Nkọwa:UFO LED High Bay Light,LED High Bay Light,UFO High Bay,LED High Bay Light UFO,,
Home > Ngwaahịa > LED High Bay Light > UFO LED High Bay Light
Ngwaahịa nke UFO LED High Bay Light , anyị bụ ndị na-emepụta ọkachamara si China, UFO LED High Bay Light , LED High Bay Light suppliers / factory, wholesale high-quality products of UFO High Bay R & D and manufacturing, anyị nwere ọrụ zuru ezu mgbe-ahịa na nkwado teknụzụ. Le anya n'ihu na nkwado gị!
200W E27 UFO LED high bay light  Kpọtụrụ ugbu a
100W E40 UFO LED high bay light  Kpọtụrụ ugbu a
150W 200W UFO LED high bay light  Kpọtụrụ ugbu a
50W 100W DOB UFO LED high bay light  Kpọtụrụ ugbu a
100w 150w 200w ọkụ akwa oriọna oriọna  Kpọtụrụ ugbu a
Meanwell Driver 240W UFO LED High Bay Light  Kpọtụrụ ugbu a
White White 200W UFO LED High Bay oriọna  Kpọtụrụ ugbu a
200W UFO LED High Bay Light na CE & RoHS  Kpọtụrụ ugbu a
CREE 150W UFO LED High Bay Light  Kpọtụrụ ugbu a
IP65 200W UFO Diana Elu Bay oriọna  Kpọtụrụ ugbu a
Drivewell Driver 100W UFO LED High Bay Light  Kpọtụrụ ugbu a
200 watt ada nnukwu mmiri ozuzo mmiri na CE / RoHS  Kpọtụrụ ugbu a
120 Igodo nke nkwalite mmụta ọsọsọ Nna-ukwu kacha elu Ching Hai 120 Degree Beam Angle Led Hgh Bay lamp  Kpọtụrụ ugbu a
100w oriọna ọkụ ọkụ na-acha ọkụ ọkụ Na afọ ise agha  Kpọtụrụ ugbu a
Egwuregwu ọkụ na-acha ọkụ ọkụ dị elu nke ọkụ na-acha ọkụ ọkụ  Kpọtụrụ ugbu a
AC 85-305V LED High Bay Light Fixtures for Basketball Court  Kpọtụrụ ugbu a
Ọnụahịa otu: USD 44.4 / Piece/Pieces
Nkwakọ ngwaahịa: 455 * 360 * 125mm / 1 pcs / CTN
200W E27 UFO LED high bay light Nkọwa: Greatzọ dị mma iji nye ọhụụ dị obosara na ntụkwasị obi dị ukwuu, ọkụ ọkụ LED bebere bụ nhọrọ a ma ama n'ọtụtụ ngwa. Ebe ọ bụ na A ga - eji ọkụ ga - arụ ọrụ site n'akụkụ dị elu, ọ dị mkpa ijiri ọkụ ọkụ...
Nkwakọ ngwaahịa: 355 * 260 * 125mm / 1 pcs / CTN
100W E40 UFO LED high bay light Nkọwa: Ebe ọ bụ na ọkụ ahụ ga-arụ ọrụ site na oke dị elu, ọ dị mkpa ijiri ọkụ ọkụ kachasị mma maka ọkụ kachasị mma. Na njiri mara nke LED UFO dị elu ọkụ ọkụ, ihe eji arụ ọrụ bụ akụkụ nke arụmọrụ. Ejiri ụdị dị mma...
Ọnụahịa otu: USD 28.29 / Piece/Pieces
Nkwakọ ngwaahịa: 370 * 370 * 190mm / 2 pcs / CTN
150W 200W UFO LED high bay light Nkọwa: Ebe ọ bụ na ọkụ ahụ ga-arụ ọrụ site na oke dị elu, ọ dị mkpa ijiri ọkụ ọkụ kachasị mma maka ọkụ kachasị mma. Na njiri mara nke LED UFO dị elu ọkụ ọkụ, ihe eji arụ ọrụ bụ akụkụ nke arụmọrụ. Ejiri ụdị dị mma...
Nkwakọ ngwaahịa: 260 * 260 * 155mm / 2 PC / CTN
50W 100W DOB UFO LED high bay light Nkọwa: Mgbe ị na-ahọrọ ọkụ ụlọ maka akwa mmiri dị elu, arụmọrụ dị mkpa. Ebe ọ bụ na ọkụ ga-arụ ọrụ site n'akụkụ dị elu, ọkụ ahụ kwesịrị ịdị kachasị elu maka ìhè kachasị mma. Site na njiri mara nke LED UFO high...
100w 150w 200w ọkụ akwa oriọna oriọna
Ọnụahịa otu: USD 90.59 - 98.23 / Piece/Pieces
100w 150w 200w ọkụ akwa oriọna oriọna Akwụkwọ data Model NO RYGHUFO-007A-200W(HBG)
Meanwell Driver 240W UFO LED High Bay Light Nkọwa: Mgbe ị na-ahọrọ ọkụ maka akwa ụlọ akwa, arụmọrụ dị mkpa. Ebe ọ bụ na ìhè ahụ ga-arụ ọrụ site na elu dị elu, ekwesịrị ịdị na-enwu ọkụ maka ìhè dị mma. Na smart imewe nke ikanam UFO elu n'ọnụ...
White White 200W UFO LED High Bay oriọna
Ọnụahịa otu: USD 88.32 - 93.69 / Piece/Pieces
White White 200W UFO LED High Bay oriọna Nkọwa: Mgbe ị na-ahọrọ ọkụ maka akwa ụlọ akwa, arụmọrụ dị mkpa. Ebe ọ bụ na ìhè ahụ ga-arụ ọrụ site na elu dị elu, ekwesịrị ịdị na-enwu ọkụ maka ìhè dị mma. Na smart imewe nke ikanam UFO elu n'ọnụ mmiri...
200W UFO LED High Bay Light na CE & RoHS
200W UFO LED High Bay Light na CE & RoHS Nkọwa: Mgbe ị na-ahọrọ ọkụ maka akwa ụlọ akwa, arụmọrụ dị mkpa. Ebe ọ bụ na ìhè ahụ ga-arụ ọrụ site na elu dị elu, ekwesịrị ịdị na-enwu ọkụ maka ìhè dị mma. Na smart imewe nke ikanam UFO elu n'ọnụ...
CREE 150W UFO LED High Bay Light Nkọwa: Mgbe ị na-ahọrọ ọkụ maka akwa ụlọ akwa, arụmọrụ dị mkpa. Ebe ọ bụ na ìhè ahụ ga-arụ ọrụ site na elu dị elu, ekwesịrị ịdị na-enwu ọkụ maka ìhè dị mma. Na smart imewe nke ikanam UFO elu n'ọnụ mmiri ọkụ, na...
IP65 200W UFO Diana Elu Bay oriọna
Ọnụahịa otu: USD 90.08 - 95.2 / Piece/Pieces
Nkwakọ ngwaahịa: Size CTN: 45 * 45 * 23cm 1 pcs / ctn NW: 4.53KG GW: 5.33KG
IP65 200W UFO Diana Elu Bay oriọna Nkọwa: Mgbe ị na-ahọrọ ọkụ maka akwa ụlọ akwa, arụmọrụ dị mkpa. Ebe ọ bụ na ìhè ahụ ga-arụ ọrụ site na elu dị elu, ekwesịrị ịdị na-enwu ọkụ maka ìhè dị mma. Na smart imewe nke ikanam UFO elu n'ọnụ mmiri ọkụ, na...
Drivewell Driver 100W UFO LED High Bay Light
Ọnụahịa otu: USD 55.93 - 58.64 / Piece/Pieces
Nkwakọ ngwaahịa: Size CTN: 32 * 32 * 21cm 1 pcs / ctn NW: 2.98KG GW: 3.5KG
Drivewell Driver 100W UFO LED High Bay Light Nkọwa: Mgbe ị na-ahọrọ ọkụ maka akwa ụlọ akwa, arụmọrụ dị mkpa. Ebe ọ bụ na ìhè ahụ ga-arụ ọrụ site na elu dị elu, ekwesịrị ịdị na-enwu ọkụ maka ìhè dị mma. Na smart imewe nke ikanam UFO elu n'ọnụ...
200 watt ada nnukwu mmiri ozuzo mmiri na CE / RoHS
Ọnụahịa otu: USD 90.89 / Piece/Pieces
Nkọwapụta ngwaahịa 200 watt ada nnukwu mmiri ozuzo mmiri na CE / RoHS Nkọwapụta ngwaahịa: Model NO.AD-UFO-200WD1 Nominal Power 200W Voltage AC 85-295V Certificate CE, RoHs Frequency Range 50Hz-60Hz Light OSRAM 3030 224pcs Life Time 50000 Hours...
120 Igodo nke nkwalite mmụta ọsọsọ Nna-ukwu kacha elu Ching Hai 120 Degree Beam Angle Led Hgh Bay lamp
Ọnụahịa otu: USD 73.51 / Piece/Pieces
Nkọwapụta ngwaahịa 120 Igodo nke nkwalite mmụta ọsọsọ Nna-ukwu kacha elu Ching Hai Nkọwapụta ngwaahịa: Model NO.AD-UFO-120WD1 Nominal Power 120W Voltage AC 85-295V Certificate CE, RoHs Frequency Range 50Hz-60Hz Light OSRAM 3030 154pcs Life Time...
100w oriọna ọkụ ọkụ na-acha ọkụ ọkụ Na afọ ise agha
Ọnụahịa otu: USD 50.55 / Piece/Pieces
Nkọwapụta ngwaahịa 100w oriọna ọkụ ọkụ na-acha ọkụ ọkụ Na afọ ise agha Nkọwapụta ngwaahịa: Model NO.AD-UFO-100WD1 Nominal Power 100W Voltage AC 85-295V Certificate CE, RoHs Frequency Range 50Hz-60Hz Light OSRAM 3030 105 pcs Life Time 50000 Hours...
Egwuregwu ọkụ na-acha ọkụ ọkụ dị elu nke ọkụ na-acha ọkụ ọkụ
Ọnụahịa otu: USD 38.72 / Piece/Pieces
Nkọwapụta ngwaahịa Egwuregwu ọkụ na-acha ọkụ ọkụ dị elu nke ọkụ na-acha ọkụ ọkụ Nkọwapụta ngwaahịa: Model NO.AD-UFO-50WD1 Nominal Power 50W Voltage AC 85-295V Certificate CE, RoHs Frequency Range 50Hz-60Hz Light OSRAM 3030 105 pcs Life Time 50000...
Nkọwapụta ngwaahịa: AC 85-305V LED High Bay Light Fixtures for Basketball Court Nkọwapụta Ngwaahịa: Model NO.RYGHUFO-007B-240W(HLG) Wattage 240W Voltage AC 85-305V, 50/60Hz Certificate CE, RoHs Beam Angle 60°90°120° Power Factor...
China UFO LED High Bay Light Ngwa
Mmiri UFO dị elu, n'ihi ọdịdị pụrụ iche, mara mma dịka UFO (UFO) na aha ya. N'iji nkuku kpochapu uzuzu nke oma, ihe ndi ozo na-acho ya, ogwu oku nke di elu nke oma di elu na-ezo aka n'osisi oriọna 3030LED, edo edo, na Taiwan Mingwei okirikiri. ike; , Kpebisie ike igbochi ọnọdụ okpomọkụ dị iche iche nke mmiri na-ekpuchi, mmiri na-ekpuchi na ihe na-ekpuchi ájá. Ogologo ndụ, ìhè na-agbagha obere, nwere ike jiri ya na gburugburu ebe obibi na ime ụlọ na-eme ihe siri ike.
Dịka ụdị ọkụ ọhụrụ nke ọhụụ, ọ na-eji oghere na-eji ncha ọkụ, ọ dịghị mkpa ịme ka reflector nwekwuo ìhè, ya mere, ọ dịghị ọkụ ọkụ mpempe ọkụ LED na-ebugharị na njem dị mfe ngbanwe nke ihe ngosi reflector, na njem akwụ ụgwọ dị ntakịrị.